Maxkamada Masar oo 45 Cisho oo xabsi ah ugu sii dartay wariyah... | Universal Somali TV
Maxkamada Masar oo 45 Cisho oo xabsi ah ugu sii dartay wariyaha Al Jazeera Mahmoud Hussein
Maxkamada Magaalada Qaahira ee dalka masar ayaa dib u cusbooney siisay muda 45 maalin ah uu xabsiga ku sii jiri doono wariyaha Al Jazeera Mahmoud Hussein iyadoo horay uu xabsiga ugu qaatay 575 isaga oo aan marin xukun maxkamadeed.
Bishii la soo dhaafay qareenka wariyahan ayaa waxaa uu ugu baaqay dowlada in ay sii deyso maadama marar badan uu dhameystay xabsiyo lagu xukumay ama maxkamada soo taagto.
Sida uu dhigayo haab raaaca sharciga waa in la sii daayaa wariyaha ama maxkamad la soo taago si uu u maro danbiyada ay dowlada ku eedeysay,maadama uu dhameystay 18 bilood oo xabsi ah oo ku beegneyd 21-dii june ee bishii la soo dhaafay,sidaasi waxaa yiri qareenka mahamed Hussein.
Wariyaha Al Jazeera ayaa laamaha Amniga masar waxaa ay xabsiga dhigeen sanadii 2016-kii xili uu magalada qaahira u tagay in uu booqdo qoyskiisa.
Shan maalin kadib war ka soo baxay xiligaas wasaarada arimaha gudaha ayaa waxaa ay ku eedeysay wariyahan in hadalo aan jirin oo sumcad dil ku ah dalka masar uu tabiyo,isaga oo u adeegaya dalal shisheeye.
Ciidamada Amniga Masar ayaa lagu eedeyay in ay jirdil u geysteen warihan uu jab kaga soo gaaray gacanta,tiiyoo ay jirto in ay diideen in isbitaal lagu soo daweeyo.
Hey,adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo bahda caalamiga ah ee saxaafada ayaa marar badan ugu baaqay dowlada masar in ay wariyahan xornimadiisa dib ugu soo celiso.
Kan-xigaTrump oo sheegay in aysan Jirin waqti...
Kan-horeKenya: Dabeylo Xoogan oo laga Cabsi q...
43,608,447 unique visits